Kuthiwa uChris Brown akafuni owayeyintombi yakhe aqome | News24
Kuthiwa uChris Brown akafuni owayeyintombi yakhe aqome
New York – Sekuvele imibiko ethi uvuke inj’ebomvu uChris Brown ngesikhathi ebona isithombe sowayeyintombi yakhe uKarrueche Tran asithathe noTyson Beckford, njengoba kuthiwa akafuni uTran ajole.
UTran, 27, ulalele izinkonondo zikaBrown ngemuva kokuthi uBeckford efake isithombe sabo enkundleni yezokuxhumana.
OLUNYE UDABA: Usephinde wahlukana nabethandana naye uChris Brown
Umthombo uthe: “Utshele uKarrueche ukuthi kumenza abukeke njengesilima futhi engendoda yalutho uma ebonakala ethatha izithombe namanye amadoda.
"Uqhube wathi ayiyinhle le nto ayenzayo ngoba yena usamuthanda ngakho kumele amuvumele amtshengise uthando ngendlela yakhe.”
Lezi zithandani zisanda kuhlukana ngemuva kokuvela kowesifazane onengane yentombazane noBrown.
UBrown wayivula le ngane ayithola nomakhwapheni wakhe, okumanje uhlala nayo emzini wakhe.